Ụlọ ọrụ nchekwa ọha
Ndụmọdụ nlekọta mberede ọkachamara
Ọzụzụ nnapụta teknụzụ ITRA enwetara ikike
Nnọọ na Ụlọ ọrụ nchekwa ọha
PSI na-enye ọrụ zuru ụwa ọnụ na nchekwa nchekwa ọha, nyocha, nyocha, agụmakwụkwọ na ọzụzụ. Iji netwọk zuru ụwa ọnụ nke ndị ọkachamara ọkachamara anyị nwere ike ịrụ ọrụ iji hụ na nzaghachi dị irè maka ihe ịma aka nchekwa ọha nke echi site na njikwa ọdachi gaa na nnapụta teknụzụ.
Ndụmọdụ nchekwa ọha na nyocha nke ndị ọkachamara n'ụwa n'ezie nwere nzere postgraduate.
ITRA enwetara ọzụzụ zuru ụwa ọnụ gụnyere eriri, oghere akpọchiri na nnapụta mmiri ide mmiri. Site na isi ruo ọkwa onye nkuzi.
Anyị na-enye nyocha na ihe gbasara nchekwa ọha na eze, site na njikwa mberede, ọdịmma anụmanụ na nnapụta teknụzụ.
Ọzụzụ Nchekwa Iju mmiri
Ọ bụrụ na ị nwere ndị ọrụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-anya ụgbọ ala gburugburu osimiri, ọdọ mmiri, ọwa mmiri ma ọ bụ ụzọ mmiri ndị ọzọ, ị mezuru ọrụ gị nke ọma ichekwa ha n'okpuru iwu ahụike na nchekwa?
Anyị na-enye ọzụzụ nchekwa mmiri ahaziri iche nke enyere ikike International Technical Rescue Association.
Iju mmiri ọtụtụ asụsụ dị n'ịntanetị & Ọmụmụ mmiri Swiftwater ugbu a efu
Ihe ọmụmụ anyị niile n'ịntanetị bụzi ọtụtụ asụsụ site na iji GTranslate. Ikpo okwu a siri ike na-eji ntụgharị igwe neural iji nye ogo ntụgharị asụsụ ọkwa mmadụ. GỤKWUO
Ụlọ ihe nkuzi nkuzi ụgbọ ala Swiftwater
Ụlọ ọrụ Safety Ọha nwere obi ụtọ ịkpọsa nkuzi nkuzi nkuzi ITRA Swiftwater Vehicle Rescue nke a ga-eme na 10-14 June, 2020 na Mangahao Whitewater Park, Shannon, New Zealand. <="" p=""> GỤKWUO
Oku maka ngwa nkwado mba ụwa
Ọ bụrụ na ị bụ nzukọ na-abụghị New Zealand na Australia, PSI na-achọ ugbu a ndebanye aha nke mmasị iji nyere otu ụlọ ọrụ na-enweghị ihe enyemaka aka ịzụlite ikike nnapụta iju mmiri nke obodo ha. GỤKWUO
© Nwebiisinka 2021 . Ikike niile echekwabara. Usoro na ọnọdụ | amụma nzuzo